सवारी लाइसेन्समा नयाँ नियम वर्ग थप गर्न लिखित परीक्षा दिनु नपर्ने सिधै ट्रायल (२०७३ चैत्र ५, शनिवार)
सवारी लाइसेन्समा वर्ग थप गर्न लिखित परीक्षा दिनु नपर्ने भएको छ । एकपटक लाइसेन्सको लिखित परीक्षा पास गरेकाहरुले अब अर्को सवारी चलाउने अनुमति लिन लिखित परीक्षा नलिने निर्णय भएको छ ।
नयाँ ब्यवस्थाले चालकहरुलाई सजिलो हुने र कार्यालय ब्यवस्थापनमा पनि सहज हुने विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले बताए ।
�एकपटक लाइसेन्स लिएपछि फेरि सवारीको वर्ग थप्न लिखित परीक्षा दिने ब्यवस्थाले झन्झट मात्रै सिर्जना गरेको निश्कर्ष हामीले निकाल्यौं� प्रवक्ता पाण्डेले भने, �हामी अब यातायात कार्यालयको ब्यवस्थापनमा पनि जुटकाले नयाँ ब्यवस्था निकै प्रभावकारी हुनेछ ।�
यो ब्यवस्था अबको एक हप्तापछि कार्यान्वयनमा जाने प्रवक्ता पाण्डेले बताए । �सफ्टवेयरमा परिमार्जन र कार्यालयहरुमा नयाँ ब्यवस्थाअनुरुपको प्राविधिक तयारीका लागि एक हप्ता लाग्छ� प्रवक्ता डा. पाण्डले भने, �अब हामी अर्को साताबाट वर्ग थपका लागि लिखित परीक्षा लिँदैनौं ।�